Allgedo.com » Barashada magacyada Malaa’igta iyo shaqooyinka ay kala qabtaan – WQ. Duuliye Asli Xasan Cabaade “Calansida”
Barashada magacyada Malaa’igta iyo shaqooyinka ay kala qabtaan – WQ. Duuliye Asli Xasan Cabaade “Calansida”
Print here| By: allgedo.com: Friday, December 6, 2013 // 12 Jawaabood
Duuliye Asli Xasan Cabaade “Calansida” ayaa inoo soo gudbisay magacyada malaa’igta iyo shaqooyinkooda:
1- Jibriil (c.s.) waa Malagga loo wakiishay Waxyiga, waana Sayidka Malaa’ igta, waana Malag aad u Quwad badan, Carshiga Allaah (s.w.t.) ayuuna u dhawyahay, waana Aamin, Malaa’ igtana Asaga ayey ka’ amar qaataan.
2- Miikaa’iil (c.s.) waa Malagga loo wakiishay qaybinta Roobka iyo ka hagintiisa.
3- Israafiil (c.s.) waa Malagga loo wakiishay Suurka lagu babbi’ inaayo Adduunkan.
4- Malakul Mawt (c.s.) oo loo wakiishay ka qaadidda Nafta, waxaana caawiyaal u ah Malaa’ ig kale marka uu ka qaadayo nafta.
5- Ridwaan (c.s.) waa Malagga haya furayaasha Jannooyinka, waxaana la shaqeeya Malaa’ ig farabbadan oo loo xilsaaray ka shaqaynta Jannada iyo hawlaheeda. (Allahayoow Hannaga Qadinin, aamiin).
6- Maalik (c.s.) waa Malagga loo wakiishay Naarta (Wal Ciyaaddu Billaah), waxaana la shaqeeya koox lagu magacaabo Zabaaniya oo ka kooban 19, waxayna cadaabaan Gaalada, Munaafiqiinta iyo Caasi walba oo diiday Allaah (s.w.t.) iyo Rasuulkiisa (c.s.w.), waana Malaa’ ig ad-adag oo aan u naxariisanayn kuwa Caasiyaasha ah.
7- Malaa’igta xambaarsan Carshiga Raxmaan waa 4 Malag, Maalinta Qiyamaha waxaa lagu siyaadiyaa4 kale.
8- Xaafidaad waa Malaa’ igta Insaanka ka ilaalisa Shayaadhiinta, Jinniga iyo Aafaadka.
9- Raqiib (c.s.) waa Malagga loo wakiishay in uu qoro xasanaadka, wuxuuna ka saaranyahay Insaanka dhinaca midig.
10- Catiit (c.s.) waa Malagga loo wakiishay in uu qoro sayi’ aadka, wuxuuna ka saaranyahay Insaanka dhinaca bidix.
11- Safara waa Malaa’ igta xafidsan Kitaabka ee ilaaliyana.
12- Naazicaad waa Malaa’ igta nafta ka qaadda Caasiyaasha.
13- Naashidhaad waa Malaa’ igta ka qaadda nafta Mu’miniinta.
14- Saabixaad waa Malaa’ igta dabbaalata Hawada ee Allaah (s.w.t.) u geeya acmaasha Ibnu Aadamka, ee ka soo qaada Allaah (s.w.t.) awaamiirta.
15- Saabiqaad waa Malaa’ igta ku tartama qaadidda acmaasha Mu’miniinta.
16- Mudabbiraat waa Malaa’ igta loo xilsaaray maamulka iyo waxa ka dhacaya Adduunka, waxayna fuliyaan Awaamiirta uu soo faro Allaah (s.w.t.) ee lagu fulinaayo Adduunkan.
Qofwalba oo Muslim ah, waxaa laga rabaa rumayta Malaa’igyada Ilaahay (s.w.t.) inuu simo oo aan lakala sarraynin.
Asli Xasan Cabaade (Calansida)
12 Jawaabood " Barashada magacyada Malaa’igta iyo shaqooyinka ay kala qabtaan – WQ. Duuliye Asli Xasan Cabaade “Calansida” "
WALAASHEEY, DUULISO ASLI, WAA ARRIN LAGU FARXO, OO HEER SARE AH. WAAYO, KII YAQAANYNA, WAA U XUSUUSIN. KAAN HORAY U AQOONINA WAA U NUUR & CILMI, WAANA AD KU MAHADSANTAHAY DADAALKA AD MUUJSAY.
WALAAKAA HOR EEBE: A. AZIZ OF TORONTO, CANADA
Allaa mahdleh. Aad baad ufiicnaanlaheyd hadaad xijaabka ku dari laheyd.
Walaal Asli aad bey ugu mahadsantahay darsiga ku saabsan Malaa’igta Allaah-SWT iyo hawlahooda kala duwan oo uu alle u xilsaaray. Wali ma arag gabar ama marwo Soomaaliyeed sida Asli oo ka aragti iyo maskax badan ragga in badan. Walaal Asli, waxaad soo bandhigtay darsi diini ah oo aad qiima badan ee Allaha ajar weyn kaasiiyo.
Waa Walaalkaa in Islam: Hassan, Hobyo, Somalia
mansha alaah walal asli ilaah ha kaa ajarsiiyo sida aad u xafiday malaa igta al aalaah ilaahayoow aadaa awood lehe adigu jannada alaah na gali oo naga waraabi oo alaah waxan kaa magan galnay naata alaaha subxaana watacaalaha ahbaan magan u nahay ikhiro iyo aduunba asc
Asc wr wbr walaashayda isku howshay soo diyaarinta Cashirkan muhiimka ah Allaah inuu wanaag kuugu badalo ayuun kaaga baryayaa. waxaana iga xasuusin ah oo dhihi lahaa culumada aqoonta Diinta ku xeeldheer hatafatiraan Qoraalkan.
Jaalle Asli Duuliye Allaah (swt) ha kaa ajar siiyo wanaaga ad naxusuusisay..Haddii la is dhaafsan lahaa qofwalba intuu aqoon hayo wax badan baa la kala faa`idaysan lahaa.Waxaa jira dad badan oo aqoon dheer leh oo an wax badan laga faa`iidin.Ugu dambeyn sida Asli oo kale qof walboow noo soo tabi wixii aqoon ah oo ad haysid.
WALAL ASLI AAD IYO AAD AYAAD UMAHAT SANTAHAY DARSIGAAN DIINIGA AH EE AAD NOO SOO BANDHIGTAY ILLAH JANATULFIRSOWSA HA KU ABAAL MARIYA ANAGANA ALLAHA NAGALIYA JANATUL FRIDOWSA WALAL KHAYR ALLA HA KUSIIYEE XIJAABKANA QAADO INSHALLAH
xusni bh says:
Masha allah ilahay ha ku barakeyo walal asli waxad nasisay darsi ad muhim u ah
Nasteex muxumad.cadwaan says:
Walal aad iyo aad baadumahadsantahay darsificanbad bixisay ajir iyo xasanad bankasogadh kuwixafido alle hanagadhigo a.s.c.k.m
waaa arin wanagsan wax ka qaalsana majiraan ajir ALLAHA KAA SIIYO
Eng Cabdixakiim says:
yaa ukht asli
maansha alaah asli ilaah ha ka ajirsiiyo cilmigana hakuu siyaadiyo uqtii ilaah haku xifdiyo janadii fardoowsa ilaah hanagu wada kulmiyo ahlu qeeyrkana ilaah hanagu daro